त्रिवि सेवा आयोग खारेजीको माग गर्दै १९ दिनदेखि अनशनमा विद्यार्थीः आयोग मौन
विशेष - रिपोर्ट , राजनीति , शिक्षा
पासाङ्ग ठकुल्ला शुक्रवार, जेठ २४, २०७६, १४:१५:०० मा प्रकाशित
काठमाडौँ । त्रिवि सेवा आयोगको परिक्षा प्रणाली निष्पक्ष नभएको भन्दै रिले अनसन सुरु गरेका विद्यार्थीहरुले आफ्ना मागहरुबारे आयोग र सरकार गम्भिर नभए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन् ।
त्रिवि सेवा आयोगले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा विभिन्न प्रशासनिक पदमा १७० जनाका लागि खुला आवेदन माग गरेको थियो । त्रिवि सेवा आयोगले गतवर्ष जेठमा खुल्ला प्रतियोगिता अन्तर्गत प्रशासनिक तथा प्राविधिक तहको विभिन्न पदमा परिक्षा लिएको थियो । आयोगले वैशाखमा लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरेको थियो । सोही नितिजामा व्यापक अनियमितता भएको ठहर गर्दै बैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी) माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थी नेताहरुले १९ दिन देखि रिले अनशन गरिरहेका छन् ।
आयोग र सरकारले आफ्ना मागबारे सकारात्मक कदम नचाले आन्दोलन चर्काउने सोही संगठनका विद्यार्थी नेताहरुले चेतावनी दिएका हुन् । बैद्य निकट अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थी संगठनका काठमाडौँ जिल्ला संयोजक संघर्ष दाहालले भने, ‘आन्दोलनको स्वरुप कस्तो हुन्छ त्यो बिषय आयोगको प्रतिक्रियामा निर्भर हुन्छ । यदी आयोग ठिक ढंगबाट अगाढी बढेन भने हामी आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न बाध्य हुन्छौ । एक दुई दिन भित्रमा आयोगले तदारुक्ता नदेखाए आन्दोलन चर्काउँछौं । हामी चहान्छौं शान्तिपूर्ण रुपमा समस्याको समाधान होस्’ ।
त्रिवि सेवा आयोगको खारेज गरिनु पर्ने, अनियमिततामा संलग्न रहेका त्रिविसेवा आयोगका पदाधिकारीहरुको वर्खास्त गरिनु पर्ने र अवैधानीक रुपमा निकालियको नतिजा रद्ध गरिनु पर्ने माग सहित उनीहरु रिले अनशनमा छन् । यता आयोगले उनीहरुका कुनै पनि माग पूरा गर्न नसकिने बताएको छ ।
तर अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थी नेताहरुले शिक्षा मन्त्रालय, त्रिवि सेवा आयोग र आफुहरुबीचको त्रिपक्षिय वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान निकालनु पर्ने अडान लिएका छन् । उनीहरुले अडान लिएपनि शिक्षा मन्त्रालयले यस बिषयमा चासो नराखेको आरोप उनीहरुको छ । नेता दाहाले भने, ‘त्रिपक्षिय वार्ताका माध्यमबाट समस्याको समाधन निकाल्न सकिन्छ । उहाँहरुले यस विषयमा पहल गरिरको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर हामीले शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन समय लिएका थियौँ । पछि उहाँहरु सम्पर्कमा आउन चाहानु भएन ।’
त्रिविले निकालियको नतिजामा अनियमिता भएको खबर बाहिर आएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा छानविन गरि रहेको छ । तर यता आयोगले नातेदार पास गराउन अनियमित तरिकाले सञ्चालन गरिएका त्रिवि सेवा आयोगका परीक्षाको अन्तरवार्ता समेत लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधिबिनै लिइएको भन्दै विद्यार्थी नेताहरु आक्रोशित बनेका छन् । खुला प्रतिस्पर्धाको कर्मचारीतर्फका कुनै पनि अन्तरवार्ता लोकसेवाबाट खटाइएका सदस्यहरुको उपस्थित नभएपछि उनीहरुले थप आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
‘अनियमितताबारे अख्तियारले छानविन गरिरहेको छ । तर यता आयोगले अन्तरवार्ता लिइरहेको छ । अन्तरवार्ताको आज अन्तिम दिन हो । यस विषयमा हामिले अख्तियारसँग बुझेका थियौँ । उहाँहरुले अन्तरवार्ता लिन सेवा आयोगलाई नभनेको प्रतिक्रिया दिए । यता सेवा आयोगका पदाधिकारीहरुले अख्तियारले अन्तरवार्ता रोक्नु नभनेको बताउँदैछन्, उनले भने, ‘अनियमिता बारे एक संवैधानिक निकायले छानविन गर्दा अर्को संवैधानिक निकायले तत्काल काम कार्वाही रोकेर सहयोग गर्नु पर्ने हो नी ? त्यो नैतिकताको पनि पालना भएको छैन । त्यसैले यसमा तलदेखि माथिसम्म सेटिंगमा अनियमितता भएको बुझिन्छ।’
उनले अख्तियारका गतिविधिबारेमा पछिल्लो समय बाहिर आइरहेका विषयहरुले अख्तियार प्रति धेरै विश्वास गर्न सकिने अवस्था नरहेको उल्लेख गरे । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले लिएको परीक्षाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार परीक्षाका कागजात र उत्तरपुस्तिका अध्ययनका क्रममा अनियमितता भेटिएको छ । त्रिवि आयोगले वैशाखमा लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरेको थियो । त्यसमा अध्यक्ष शर्मा, प्रशासकीय प्रमुख परशुराम कोइरालालगायत त्रिविकै उच्च तहका पदाधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी नेता र राजनीतिक दलका पहुँचवाला नेताका आफन्त र निकटका व्यक्तिलाई पास गराइएको भन्दै अख्यितारमा उजुरी परेको थियो । अनुसन्धानमा गडबडी देखिए परीक्षा रद्द गरिने उनले जनाए ।
अख्तियारको छानबिनपछि अधिकृत तहको अन्तरवर्ता स्थगित गरिएको छ । शर्माकी भतिजी र कोइरालाकी छोरी अधिकृत पदको परीक्षामा संलग्न छन् । नातेदार परीक्षार्थी हुँदाहुँदै उनीहरू प्रश्नपत्र छपाइ र उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा संलग्न रहेको आरोप छ । शिक्षाविद्हरुले त्रिवि आयोग धेरै नै विवादमा तानिएकोले यसप्रति विश्वसनीयता गुम्दै गएको बताएका छन् ।
अनियमित तरिकाले सञ्चालन गरिएको परीक्षा रद्दको माग गर्दै १९ दिनदेखि जारी विद्यार्थीको अनशनमा राजनीतिक दलका नेतादेखि शिक्षाविदरुले ऐक्यबद्धता समेत जनाएका छन् । यद्यपी अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थी नेताहरुले प्रमुख ठूला दुई दलको भागवण्डा आयोगले नतिजा निकालेको भन्दै उनीहरु निकट विद्यार्थी संगठन यस विषयको विरुद्ध आउन नसकेको आरोप लगाएका छन् । तर ठुला दल निकट विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले व्यक्तिगत रुपमा ऐक्यबद्धता जनाएकोले सद्भाव व्यक्त गरेका छन् ।
यस कारण रोकिन्छ लोकसेवाको विज्ञापन लोकसेवा आयोगको विज्ञापनबारे अहिले विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न राज्यव्यवस्था समितिको निर्देशनपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । बिहिवार, जेठ ३०, २०७६, १३:५०:००
दुई अध्यक्षको अभिव्यक्तिले नेकपामा संकट यसले के फरक पार्छ राजनीतिमा दुई या तीन वर्ष बस्दा । नेकपाको बहुमत छ, त्यो महत्वपूर्ण विषय हो ।’ उनले थपे, ‘देशको विकास नगर्ने, विकास कसरी हुन सक्छ ? भन्ने कुरा नगर्ने, स्थिरता र स्थायीत्व कसरी हुन सक्छ ? त्यतापट्टी नजाने ? अनि हरेक कुराको विरोध गर्नुपर्ने, नकात्मकता फलाउनुपर्ने किन हो ? मलाई आश्चार्य लाग्छ । शनिवार, जेठ १८, २०७६, १०:१६:००